आचार्य प्रभा – Page3– मझेरी डट कम
हाम्रो साहित्यिक आकाशबाट फेरि एउटा नक्षत्र झरेको छ, कहिल्यै नउदाउने गरी । कथाकार तथा साहित्यकार स्व. देवकुमारी थापाको पाषाण शरीर माटोमा बिलिन भए पनि वहाँका कृतिहरू नेपाली साहित्यकाशमा अजर, अमर छन् ।
वहाँको ८२ बर्षको उमेरमा बिराटनगरको आफ्नै निवास स्थानमा निधन भएको हो ।
साहित्यकार थापा जन्म भारतको दार्जीलिङमा जन्मुभएको थियो । दार्जीलिङ्को नेपाली साहित्यिक बातावरणले वहाँलाई पनि नेपाली साहित्यमा आकर्षित गर्यो, र कालन्तरमा वहाँ बिशेष गरी कथा लेखनमा समर्पित हुनु भयो ।
आज कस्तो चोट लाग्यो पराईलाई आफ्नो ठान्दा
मनभित्र शूल गड्यो टाढाकोलाई नजिक मान्दा ।
दुध पिलाई पालेकीथेँ उस्को जीवन बाँचोस् भनी
तर बिष् पो ओकल्यो नि मैले मान्छे भनी जान्दा ।
बाँचेथ्यौ संसारलाई प्रतिभाले हँसाएर
रुँदैछौ आज तिमी आफ्नै आँखा रसाएर ।
जीवन सँगिनीको बिछोड त असह्य भो
त्यसैले हिक्का छाड्यौ अँश्रुधारा खसाएर ।
संसार यस्तै नै छ एकदिन छुट्नै पर्छ
तिमीले हाँस्नु अब खुशी मनमा टँसाएर ।
पराक्रमी बनेर आउनु २०६८ साल
नयाँ पालुवा रुपी
शैशवकाल लिएर आयौ
धन्य छ तिम्रो आगमन
बिगतमा झैँ तिमी
रगतको अक्षर बनेर नलेखिनु
हर नेपालीको मनभित्रको
आक्रोश र हिँशा बनेर
तिमी नमात्तिनु ।
अनेसास कोलोराडोको नियमित कवि गोष्ठी सम्पन्न (२०११, मार्च)
अन्तराष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास) कोलोराडो च्याप्टर अन्तर्गत संचालन भइरहेको कवि गोष्ठी “साहित्य संगम” मार्च २०११ अंक २६ मार्चमा आयोजना भयो । कार्यक्रम हरि अधिकारी तथा मीना पौडेलज्युको आतिथ्यमा वहाँहरूकै निवास स्थान हेन्डरसन कोलोराडोमा भब्यताका साथ सम्पन्न गरिएको थियो ।
उक्त कार्यक्रमको संचालन अनेसास, कोलोराडो च्याप्टरका अध्यक्ष श्री पदम विश्वकर्माले गर्नु भएको थियो ।
बसेको बस्ती उठिदिँदा यसरी
देखेको सपना लुटिदिँदा यसरी ।
कसरी बुझ्छ अब दिल लौन नि
परिवार सबै छुटिदिँदा यसरी ।
के भयो भर प्रकृतिको हेर न
निर्दयी बनी टुटिदिँदा यसरी ।
अन्तराष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास) कोलोराडो च्याप्टरद्वारा फेब्रुवरी १२ तारिख शनिबारको दिन सरस्वती पूजा सम्पन्न भयो ।
भन्छन् सबै प्रेम दिवस संघारमा आयो रे
एकार्काको मुटु बिच प्रेमको शित छायो रे ।
युगल् जोडी जताततै प्रेमिल् गीत सुन्दैछन्
अधरको चुम्बन् छाडी मनले माया लायो रे ।
बासनात्मक माया हैन ज्यानै दिन राजी छन्
दुई मुटु एकै मानी एकार्कामा चाह्यो रे ।
नगर अब जातको कुरा जमाना अर्को छ
छुवाछूत् जति गर्दछौ तिमी सहन चर्को छ ।
बयान के गरौं ?
धर्तीको धुलो म जूनको बयान के गरौं
मोतीको अघि त्यो सुनको बयान के गरौं ?
हराइसकें ती खैंचडी, मादल, बिनायो
पुराना सबै नै धुनको बयान के गरौं ?
खोजेको जस्तै भो नशालु मायालु मुहार
नसकी अब लौ! उनको बयान के गरौं ?
स्वरको धनी कुमार तिमी मरेर जाँदैनौ
गीतको नदी कहिल्यै पनि तरेर जाँदैनौ ।
संसार भर घन्कियो स्वर मिठास भरेर
संगीत बाग छाडेर तिमी झरेर जाँदैनौ ।
आवाज तिम्रो गुन्जी नै रन्छ दुनियाँभरिमा
सम्झना मात्र यो धर्ती माझ छरेर जाँदैनौ ।
अन्तरराष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास) कोलोराडो च्याप्टरद्वारा प्रस्तुत “प्रकाश श्रेष्ठ सांगीतिक साँझ” यही जनवरी ८ तारिख शनिबारका दिन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो ।
मौनताभित्र हराए सरी भयो नि जिन्दगी
आफैंमा पनि डराए सरी भयो नि जिन्दगी ।
सुन्यता भित्रै छाउँथ्यो हरे! मनको मौनता
अनायस फेरि कराए सरी भयो नि जिन्दगी ।
आशाको झिनो लहरा तान्दै बाँचेथ्यो यो तन
अन्यत्र टाढा सराए सरी भयो नि जिन्दगी ।
एक्लो यो मन एकान्त पन कहिले सम्म हो ?
उराठ बाग चराए सरी भयो नि जिन्दगी ।
साहसको आसुँ झार्न सिकायौ अनुराधा तिमीले
राहतको पुल तार्न सिकायौ अनुराधा तिमीले ।
ममत्वको भिक्षा बाँड्न लगाई मनबाटै यसरी
कलेजीको माया सार्न सिकायौ अनुराधा तिमीले ।
कहिल्यै नि हुन्न हार्न सिकायौ अनुराधा तिमीले ।
नारीहरू बन्दछन् नि अति नै कोमल र कम्जोर
मनलाई हुन्न मार्न सिकायौ अनुराधा तिमीले ।
नव यौवनाको बर्णनरुपी गजल
सधैंभरि, मुस्काउने, कस्तो मीठो, बानी ?
देख्दा लाग्छ, बैंशालु छौ, यथार्थमा, सानी ।
सरल छौ, सहज छौ, साँच्चै शालिन्, पनि
झुकाउँछौ, सधैं शिर, सारा आज्ञा, मानी ।
सुकुमारी, सुवासिली, लज्जावती, छौ नि
प्रकृतिले, सजाएकी, सौन्दर्यकी, रानी ।
रूप हेर्दा, लाग्छ यस्तो, गर्छौ धेरै, शृंगार्
ईश्वरको, बरदान् पाकी, लक्षिणकी, खानी ।
भन्दछन् सबै संघारमा दशैँ आयो सुन
बिहानी बनी खुशीयाली कति छायो सुन ।
चाडबाड् भनी सबै हेर कति खुशी हुन्छन्
दु:खले दिक्क पीडित् मन्ले सुख पायो सुन ।
बसन्त फर्की रनबन कति हर्ष छर्छ
खुशीको गीत कोइलीले मीठो गायो सुन ।
मन मेरो चोरी भाग्छौ ?
नजाऊ तिमी मदेखि धेरै टाढा